आँप बिक्री - आधारभूत कपडा तपाईलाई यो सिजन चाहिन्छ | बेजिया
सुसाना Godoy | 14/01/2022 10:00 | मैले के लगाउने?
को आम बिक्री तिनीहरूले तपाईंको ढोका ढकढक गर्छन् र अब तपाईंले साँच्चै अद्भुत छुटहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीले तपाइँको लागि छनौट गरेका प्रत्येक कपडाको मजा लिने अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन। किनकि तपाईलाई दिनहुँ तपाईको दिनमा तिनीहरूलाई आवश्यक पर्नेछ किनभने तिनीहरू वास्तवमै आधारभूत छन्।
यसका अतिरिक्त, तपाईलाई पहिले नै थाहा छ कि केहि नयाँ वस्तुहरू प्राप्त गर्नको लागि बिक्री सधैं सही समय हो जुन तपाईले धेरै महिनासम्म लगाउन सक्नुहुन्छ। कार्यात्मक कपडाहरू जुन तपाईले निम्न चयनमा पनि पाउनुहुनेछ। के तपाई यो के हो जान्न चाहनुहुन्छ? यस सिजनको उत्कृष्ट शैलीको मजा लिन तिनीहरूमध्ये प्रत्येकको राम्रो नोट लिनुहोस्!
1 आम बिक्री स्वेटर र कार्डिगन
2 कोट बिक्रीमा
3 लुगा वा स्कर्ट?
4 डेनिम प्यान्ट र ओभरलहरू
आम बिक्री स्वेटर र कार्डिगन
आँप बिक्री बोकेर आउँछ स्वेटर र कार्डिगनको सन्दर्भमा पनि उत्कृष्ट विचारहरू। त्यसकारण पहिलो अवस्थामा, हामी सामान्य नियमको रूपमा, खुल्ला कपडाहरू फेला पार्न जाँदैछौं, जसले हामीलाई प्रत्येक दिनको लागि आरामको स्पर्श दिनेछ। तर त्यो सबै होइन, किनभने एकातिर, उत्कृष्ट आधारभूत कुराहरू सधैं हाम्रो पक्षमा हुनेछन्, तर तिनीहरूका अतिरिक्त, विवरणहरू जस्तै स्फटिक, कढाई वा कट-आउट नेकलाइनहरू पनि परेड छुटाउन चाहँदैनन्। यसैले तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुने भन्दा कम मूल्यहरूमा विस्तृत विविधताबाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
अवश्य पनि, यदि तपाइँ ज्याकेट लगाउन रुचाउनु हुन्छ भने, तपाइँसँग सधैं फर्ममा विकल्प र अधिक छ। किनभने तिनीहरू पनि त्यो फराकिलो फिनिशको साथ देखा पर्छन् जसले हामीलाई सहजता छोड्छ तिनीहरूलाई टी-शर्ट वा रिबड स्वेटरहरूसँग जोड्नुहोस् तिनीहरू अन्तर्गत। यदि सम्भव छ भने, कपडालाई थप व्यक्तित्व दिन ठूला बटनहरू सहित, नरम र साधारण कपडाहरू छनौट गर्ने यो समय हो। तटस्थ वा आधारभूत रंगहरू अनन्त नायक हुनेछन्।
अवश्य पनि यो सिजनको लागि सबैभन्दा आधारभूत कपडाहरू मध्ये एक कोटमा पर्छ। किनभने तिनीहरूले हामीलाई अझ सहज र निस्सन्देह, सधैं चिसोबाट टाढा हुन अनुमति दिन्छ। त्यसोभए, एकातर्फ हामी आँपको बिक्रीको बीचमा एक उत्तम विचारलाई बचाउँछौं र त्यो हो कि यो उल्टाउन मिल्ने कपडा हो। त्यसोभए हामीसँग एकको लागि दुई छ र हामी त्यो माया गर्छौं: एकातिर, छालाको प्रभाव जबकि अर्कोमा, यो कपाल हुनेछ जसले हामीलाई न्यानो राख्छ।
तर यदि तपाईंलाई कोट मनपर्छ भने तिनीहरू ऊन जस्तै शैलीबाट बाहिर जानुहुन्न र डबल ब्रेस्टेड, तपाईं भाग्यमा हुनुहुन्छ। उनीहरुलाई पनि फर्मले ध्यान दिएको देखिन्छ । किनभने तिनीहरू आधारभूत छन् र जसको साथ हामी विभिन्न फिनिश र शैलीहरू सिर्जना गर्न सक्छौं। कपडा प्यान्ट संग अन्य अर्ध-औपचारिक रूपमा जीन्स संग जोडिएको ती बाट। यो तिमीमा भर पर्छ!
लुगा वा स्कर्ट?
यदि तपाईलाई छनोट गर्न केहि कठिन छ भने, त्यसपछि तपाईले दुबै रोज्नु राम्रो हुन्छ। किनभने एकातिर मिडी र रिब्ड लुगाहरू सधैं उत्कृष्ट आधारभूत मध्ये एक हुन्। यति धेरै कि तपाईं एक भेस्ट, फराकिलो बेल्ट वा तिनीहरूलाई सबै प्रमुखता दिन केही पनि साथ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ, आधारभूत रंगहरूमा प्रिन्ट भएका घुँडा-लम्बाइ स्कर्टहरू पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा फेसनलाई एकीकृत गर्ने अर्को उत्तम तरिका हो।
डेनिम प्यान्ट र ओभरलहरू
काउबॉय शैली बिक्री कपडाहरू बीच हराउन सकेन आँप मा। तर यस अवस्थामा हामी तिनीहरूलाई बिबको साथ हाइलाइट गर्न चाहन्थ्यौं। किनभने यो सधैं अर्को कपडा हो जसले ठूलो आराम प्रदान गर्दछ र जस्तै, तिनीहरू हाम्रो जीवनमा उपस्थित हुन योग्य छन्। अब, सीधा र कपडा प्यान्ट धेरै पछि छैन। किनभने हामी तिनीहरूलाई काम गर्न वा ती महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा लगाउन सक्छौं। त्यो हुन सक्छ, तिनीहरू बिक्रीमा तपाइँको लागि पर्खिरहेका छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » फेसन » मैले के लगाउने? » आधारभूत कपडाहरू जुन तपाईंले आँप बिक्रीमा पाउनुहुनेछ
यात्रामा जानका लागि उत्तम सुझावहरू